Yobhi 40 | IBhayibhile Kwi-Intanethi | INguqulelo Yehlabathi Elitsha
40 Waza uYehova wamphendula uYobhi wathi: 2 “Ngaba lowo uhlaba amadlala angasukuzana noSomandla?+Makaphendule lowo wohlwaya uThixo.”+ 3 Waza uYobhi wahlabela mgama wamphendula uYehova wathi: 4 “Khangela! Ndiyinto engento.+Ndiya kukuphendula ndithini na?Isandla sam ndisibeke emlonyeni wam.+ 5 Ndithethile kwaba kanye, yaye andiyi kuphendula;Yaye kabini, ibe andiyi kongeza nto.” 6 Waza uYehova wahlabela mgama wamphendula uYobhi ekwisaqhwithi+ somoya wathi: 7 “Khawuncede, ubhinqe amanqe akho njengendoda eyomeleleyo;+Ndiza kukubuza, uze wena undazise.+ 8 Eneneni, ngaba uya kukutshitshisa ukuba sesikweni kwam?Ngaba uya kundivakalisa ndingendawo ukuze wena ube ngolungileyo?+ 9 Okanye ngaba unengalo enjengekaTHIXO oyinyaniso,+Yaye ngaba ngelizwi elinjengelakhe unokwenza kududume?+ 10 Khawuncede, uzivathise ukongama+ nokuphakama;+Uze uzambathise isidima+ nobungangamsha.+ 11 Makuphalale ukudubuleka kokuvutha komsindo wakho,+Uze ubone bonke abanekratshi yaye ubahlise. 12 Babone bonke abanekratshi, ubathobe,+Ubanyathele abangendawo kanye kuloo ndawo bakuyo. 13 Bafihle ndawonye eluthulini,+Bopha ubuso babo endaweni efihlakeleyo, 14 Yaye mna, ndiya kukuncoma,Ngenxa yokuba isandla sakho sasekunene sinokukusindisa. 15 Khawubone iBhehemote endiyenzileyo kwanjengawe.Itya+ ingca eluhlaza kanye njengenkunzi yenkomo. 16 Uyabona, amandla ayo asesinqeni sayo,Yaye amandla ayo amakhulu+ akwimisipha yesisu sayo. 17 Umsila wayo iwugobela phantsi njengomsedare;Imisipha yamathanga ayo ibhijelene. 18 Amathambo ayo yimibhobho yobhedu;Amathambo ayo omeleleyo anjengemivalo yentsimbi. 19 Kukuqala kweendlela zikaThixo;UMenzi+ wayo unokulisondeza ikrele lakhe. 20 Kuba iintaba ziyithwalela imveliso yazo,+Nawo onke amarhamncwa asendle adlala apho. 21 Ilala ngaphantsi komthole onameva,Kwindawo efihlakeleyo yeengcongolo+ nendawo engumgxobhozo.+ 22 Umthole onameva uyigcina ithintelekile ngesithunzi sawo;Imingcunube yasentlanjeni iyayingqonga. 23 Ukuba umlambo uphuphuma kakhulu, ayibaleki ngokuphakuzela.Inentembelo, nangona iYordan+ inokugqabhuka emlonyeni wayo. 24 Ngaphambi kwamehlo ayo ngaba nabani na unokuyithabatha?Ngaba nabani na unokuyigqobhoza ngemigibe impumlo yayo?